Adeegga Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee CNC & Soo-saaraha | Processing Birta Hengli
Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan oo qalabaynta ah oo ay ka mid yihiin taabashada, qodista, iyo qashin-qubka. Hengli waa koox leh qaybo khibrad u leh CNC, qaybo ka mid ah mashiinada CNC, qaybo CNC u jeestay, iyo soosaarayaasha qaybo sax ah oo CNC ah. Adeegyada makiinadaha 'One-Stop CNC' ee uu bixiyo hogaamiyaha kooxda, oo loogu talagalay horumarinta iyo soosaarida mashaariicdaada.
Aqoon-isweydaarsigayaga Mashiinka wuxuu leeyahay qiyaastii 70 shaqaale, waxaa jira 13 qaybood oo xarumo farsameyn ah oo CNC ah, 6 qaybood oo ah xarumaha qodista iyo xoqidda CNC, 1 set oo ah CNC caajis caajis ah iyo mashiinka wax shiida, iyo noocyo kala duwan oo qalabka mashiinnada ah: oo ay ku jiraan 8 mitir oo dheer, 3 nooc oo mashiinka rogaya, 9 nooc oo ah mashiinada lathe CNC, 4 nooc oo mashiinada wax shiida.
Waxsoosaarka Birta ee 'Hengli Metal Processing' waa shirkad si rasmi ah u alwaaxda birta oo leh adeegyo dheeri ah oo goynta tuubbada leysarka oo ay ka go'an tahay inay fuliso dhammaan shuruudaha birahaaga caadada u ah. Hawlgalka illaa 2002, shirkadeennu waxay bixisaa adeegyo dhammaystiran oo dhammaad illaa dhammaad ah oo ka bilaabma kaalmada naqshadaynta injineernimada, falanqaynta qiimaha been abuurka ah, horudhaca wax soo saarka, wax soo saarka iyo saadka. Hawlgalkeennu waxaa lagu fuliyaa 50,000 sq m. xarunta oo ay weheliso foorarsiga, alxamida, laser-ka iyo goynta tuubada-laser-ka, isu-imaatinka iyo saldhigyada maraakiibta oo si buuxda ugu qalabaysan qalabka wax soo saarka ugu horumarsan suuqa isla markaana laga heli karo goobta. Maadaama ay tahay shirkad si buuxda loo aqoonsan yahay oo ISO ah oo ka badan 18 + sano oo khibrad ah oo bixisa adeegyo been abuur sax ah macaamiisheenna gudaha iyo dibaddaba, Hengli waxay isu asaastay inay tahay hoggaamiye warshad ku takhasusay qaabab lagu soo bandhigo dukaammada dhammaadka-dambe leh iyo soo-bandhigyo, xambaarayaal bir bir ah, xirmooyinka korantada iyo qaybo warshadeed iyo qaybo ganacsi.
Hore: Adeeg Jarida Laser
Xiga: Xarunta Saadka